Wasiirka Batroolka oo hor tagaya xaafiiska Xeer Ilaaliyaha | KEYDMEDIA ENGLISH
Wasiirka Batroolka oo hor tagaya xaafiiska Xeer Ilaaliyaha
Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta, Cabdirashiid Maxamed Axmed, ayaan wali la kulmin, wax xil-ka qaadis ah iyo dacwo ka dhan ah heshiiska uu saxiixay, taas oo sii kordhineysa shakiga laga qabo in xaafiisyada sar-sare wax ka ogaayeen saxiixa.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta, Cabdirashiid Maxamed Axmed, ayaa maanta la filayaa inuu hor tago, xaafiiska Xeer Ilaaliyaha Qaranka, si uu uga jawaabo, su’aalo la xariira heshiiskii Shidaal ee uu la galay Shirkadda Coastline Exploration Limited, oo horey loo oran jiray SOM Oil & GAS.
Heshiiska shidaalka ayaa waxaa uu ahaa mid qarsoodi ah, Cabdirashiid, wuxuu sheegay, in Coastline, looga fadhiyo in ay 7 milyan oo dollar ku shubto Bangiga dhexe, hayeeshee, lacagta lagu qaatay [Signing bonus] ayaa ah $14 milyan, wuxuuna qariyay halka ay martay 7-bada milyan ee maqan, ee saxiixa lagu qaatay.
Wasiirka ayaa qiray in Farmaajo uu gacan ku siiyay inuu galo heshiiskan, oo kusoo aaday xilli dalka uu ku jiro marxalad kala-guur ah, hayeeshee, Farmaajo ayaa beeniyay inuu wax ka ogaa hesheeskaas, sidoo kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Mxamed Xuseen Rooble, ayaa sharci darro ku tilmaamay.
Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud, ayaa hore heshiiskan ku tilmaamay mid sharci darro ah, wuxuuna su’aalo weydiiday, Maamulaha Shirkadda Coastline Exploration C/llaahi Shiikhey Baa-xasan, kaas oo ku eedeysan xaraashka shidaalka Soomaaliya, iyo shaqsiyaad kale.
Kedmedia Online, ayaa baahisay, 3 March 2022, in Xaafiiska Xeer ilaaliyaha guud uu u yeeray, afar xubnood oo ka tirsan Guddiga Batroolka Soomaaliya, kuwaas oo qeyb ka ahaa, shaqsiyaadkii fududeeyay in shirkadda, C/llaahi Shiikhey loo saxiiyo heshiis shidaal.
Xubnahaas ayaa kala ah; Caasha Cismaan Axmed, oo Guddoomiye ku xigeyn ka ah, Hay’adda Bartoolka Soomaaliya, Cabdiqaadir Aadan Maxamuud, Ibraahim Cabdiqaadir Maxamed iyo Cabdixafiid Cali Dirir, waxayna 06/03/2022, tageen Xaafiiska Xeerilaaliyaha.
Farmaajo iyo Kooxdiisa, ayaa caan ku ah ku takrifalka iyo musuqmaasuqa hantida Qaranka, waxaana la xasuustaa in shir la xariiray arrimaha shidaalka Soomaaliya oo 2019 ka dhacay London, lagu galay heshisyo hoose, kuwaas oo sababay in six un loo xaraasho qeyb ka mid ah baloogyada Shidaalka.
Afar sano oo uu ahaa Madaxweyne dalka iyo hal sano oo sharci-darro uu ku joogo Madaxtooyada, Farmaajo, kaliya hal mar ayuu sameeyay xisaab-xir, ay ka maqan tahay ku dhawaad 50 milyan oo dollar, taas oo muujineysa boobka uu ku hayo xoolaha umadda.